URezek - Umculo wamahhala kunye nokulandwa kwemidiya yevidiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
ikhayaIzithuba ezithi "Rezek"
iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 25.4.2018
iiKrkonoše (I-Riesengebirge yaseJamani, i-Polish Karkonosze) yinto epheleleyo kunye neentaba eziphakamileyo kwiCzech nase-Highlands. Lihlala ngasempuma-mpuma yeBohemia (inxalenye esentshonalanga ihlala kwingingqi yaseLiberec, inxalenye esempuma ye Královéhradecký) kwaye
DJI Phantom 4 Rezek, iintaba ezinkulu
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 6.1.2018
Rezeki (iiKrkonoše) - igama lendawo kwiiNtaba, ukuhlaliswa okuhambelana nesixeko Jablonec nad Jizerou. iiKrkonoše (I-Riesengebirge yaseJamani, i-Polish Karkonosze) yinto epheleleyo kunye neentaba eziphakamileyo kwiCzech nase-Highlands. Kukho
Ukuphuma kwelanga, iRezeki, iintaba ezinkulu
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 1.1.2018 1.1.2018
Ukwindla kwelanga kwi-Ridge ephezulu kwiiNtaba kwisisombululo se4K. iiKrkonoše (I-Riesengebirge yaseJamani, i-Polish Karkonosze) yinto epheleleyo kunye neentaba eziphakamileyo kwiCzech nase-Highlands. Kukho
Rezek Mountains & Autumn ekuseni
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 30.12.2017 30.12.2017
Ukwindla kwelanga kwi kwiiNtaba na Rezku. Rezeki (iiKrkonoše) - igama lendawo kwiiNtaba, ukuhlaliswa okuhambelana nesixeko Jablonec nad Jizerou. iiKrkonoše (I-Riesengebirge yaseJamani, i-Polish Karkonosze) iyonke ingqungquthela kunye neentaba eziphezulu zeCzech kunye neCzech